Xildhibaan ka tisan Dowladda Federaalka ah oo Noqo doona Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug - Awdinle Online
Xildhibaan ka tisan Dowladda Federaalka ah oo Noqo doona Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug
December 21, 2019 (AO) – in kastoo mudo dheer ay dowladda federaalka ah wakhti gelisey maamul u dhisida galmudug hadana weli wax natiijo lagama gaarin, hase ahaatee waxaa dhawaan la filayaan lasoo gabagabeeyo dadaalkii iyo wakhtigii dheeraan la geliyey galmudug.
Sida la wada rajeynayo dadka reer galmudug waxaa ay maanka ku hayaan in ugu dambey dhamaadka bisha janaayo ee sanadka cusub 2020 galmudug ay yeelato maamul cusub.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga baqdin qabaa in ay si awood ah u dhisato maamulka cusub ee galmudug.
Iyadoo uu jirey musharax si toos ah ay dowladu u taageereyso oo la doonaayo inuu noqdo Madaxweynaha galmudug ka mid ah xukuumadda ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Howlaha guud iyo dib u dhiska, ayaa hadana waxaa soo baxay xildhibaan ka mid ah golaha shacab oo isna dowladu ay u rabto Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug.
Xildhibaan Xuseen Qaasin Yuusuf oo loo yaqaano Xuseen iidoow ayaa la filayaan inuu si lama filaan ah ku noqdo gudoomiya cusub ee baarlamaanka maamulka galmudug, Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa arintaasi la sheegeynaa inuu dadaal dheer ah ku bixinaayey waayaham dambe.
In kastoo Xildhibaan Xuseen iidoow uu yahay kooxda gaarka ah ee Ra’iisul Wasaare uu u isticmaalo danahiisa gaarka ah, hadana Lama hubo in Xuseen iidoow uu ku guuleysan doono gudoomiyenimadda baarlamaanka maamulka galmudug.
Previous articleHow Egypt reacted to Ethiopia’s move on Red Sea
Next articleWaa kuma Maareeyaha Cusub ee Golaha Murtidda iyo Madadaalada Qaranka?